Mabatirwo eZvirango neEuropean Union Okonzeresa Mutauro
Kukadzi 17, 2011
Nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, nevamwe vavo muZanu PF, yava kutemesa vanhu musoro zvichitevera danho rakatorwa neEuropean Union rekubvisa zvirango zvanga zvakatemerwa madzimai evamwe vakuru muZanu PF nemuchiuto, uye dzimwe nhengo dzeZanu PF.
E-U yakabvisa zvirango pavanhu vanodarika makumi matatu, vanosanganisira vashakabvu, richisiya vamwe vanodarika zana nemakumi matanhatu.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho reEuropean Union iri vachiti vana veZimbabwe vachiri kushungurudzwa, izvo zvinoita kuti E-U isabvise zvirango.
Bato reZanu PF rakabatana nebato reMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube mukushora sangano reEuropean Union nekuramba rakatsika madziro nezvirango zvinonzi nemapato maviri aya zvakatemerwa nyika, uye zviri kuvhiringidza budiriro yenyika.
Zanu PF, kuburikidza nevakarwa hondo yerusununguko, inonzi iri kumanikidza vanhu kusaina gwaro rekushoropodza zvirango. Bato iri rinoti riri kuda masiginecha mamiriyoni maviri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vaudza Studio 7 kuti kana Zanu PF ichida kuti zvirango zvibviswe, ngaitange yabvisira vana veZimbabwe zvirango zvayakaisa munyika zvekumbunyikidza vanhu.
Asi mutewedzeri weMDC yaVaWelshman Ncube, VaEdwin Mushoriwa, vanoti zvirango zvinofanirwa kubviswa kuitira kuti Zanu PF ishaye chekuhwanda nacho pakushungurudzwa kwevanhu.
Hurukuro naVapedzisai Ruhanya, Pamwe naVaEdwin Mushoriwa